Fanamboaran-dalana namoa-doza :: Roa lahy maty tototry ny tany tany Ankazondandy • AoRaha
Niharam-boina teo amperinasa ireto lehilahy maromaro nanamboatra lalana tany Ankazondandy, Manjakandriana, afak’omaly tolakandro. Namoy ny ainy ny mpiasa roa lahy, 20 sy 22 taona. Telo hafa naratra. Olontsotra iray kosa tsy nahatsiaro tena rehefa main’ny herinaratra tamin’ny andrin-jiro iray nianjera.
Manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) ny iray amin’ireo telo naratra, izay tena voa mafy. Nasiam-panamboarana, efa ho iray volana izao, ny am-pahandalana amin’ny lalam-pirenena fahatelo hiditra an’Ankazondandy. Mpiasa avy amina orinasa iray no nisahana an’ izany. Nifarimbona tamin’ny fanatontosana ny asa ny mpiasa folo lahy, afak’omaly. Niseho ny tsy nampo-izina, tokony ho tamin’ny dimy ora hariva.
“Tapaka io ampahandalana io satria nasiana lakandrano lehibe manapaka ny arabe. Somary nanelingelina kosa ny andrin-jiro iray teo amin’ny faritra niasana. Noezahina tsy nokitihina io andrin-jiro io kanjo nirodana tampoka. Nitriatra ny tany ka niteraka fihotsahana”, araka ny nambaran’ny mpitandro filaminana, tonga nijery ny zava-misy teny an-toerana.
Namonjy an’ireo mpanao lalana tra-doza ny mponina teo amin’ny manodidina. Tototry ny tany ny mpiasa dimy lahy. Voavonjin’ny fokonolona ny telo tamin’izy ireo saingy naratra ka nentina namonjy toeram-pitsaboana avy hatrany. Mbola niara-nisalahy tamin’ny fitadiavana ny roa lahy ambiny tao anaty tany ny fokonolona. Angady sy fitaovana tsotra no nampiasain’ izy ireo. Hita voalohany ny vatana mangatsiakan’ny lehilahy iray, roapolo taona. Ora iray sy sasany taty aoriana vao tazana ny faharoa, roa amby roapolo taona. Main’ny herinaratra avy tamin’ny andrin-jiro nianjera indray avy eo ny iray tamin’ireo olona nitangorona.